Technology – Page4– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
ललितपुर विश्वको ३५ औं कलानगरी
काठमाडौं । ललितपुरलाई विश्वको ३५ औं कलानगरीको सूचीमा राखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्व कला परिषद्ले ललितपुरलाई ३५ औं उच्च कोटीमा राखेको हो । ललितपुर महानगरीका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई विश्वकला परिषद्ले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरी ससम्मान उक्त जानकारी गराएको हो । वास्तु कलाका हिसाबले ललितपुर आफैमा निकै प्राचिन सहरहरुमध्येमा पर्दछ । […]
Posted in: Jiwan saili, mainNews, Technology, Tourism
भेरी–बबई सिंचाइ आयोजनामा टनेल बोरिङ मसिनको प्रयोग
काठमाडौं । भेरी–बबई सिंचाइ आयोजनामा पहिलो पटक नेपालमा टनेल बोरिङ मसिनको प्रयोेग गरिएको छ । यो निश्चित भौगर्भिक सर्भे र त्यहाँ रहेको माटो तथा चट्टानको स्थिति पत्ता लगाए पछि मात्र प्रयोगमा ल्याइन्छ । भेरी नदी बबईमा झार्ने योजना अन्तर्गत उक्त टनेल बोरिङ मसिन प्रयोग भइरहेको छ । यसको प्रयोगले भनेकै समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिने […]
Posted in: Artha Jagat, mainNews, Technology
बिछ्याइएन मध्यपहाडी लोक मार्गमा अप्टिकल फाइबर
काठमाडौं । मध्यपहाडी लोक मार्गमा बिछ्याउने भनी गरिएको अप्टिकल फाइबरको संझौता आजसम्म पनि कार्यान्वयनको सुरसार गरिएको छैन । नेपालको आधिकारिक दूरसञ्चार संस्थान नेपाल टेलिकम र भारतको युटीएललगायतका केही संस्थाहरुलाई संझौतासहित अर्बौको पुँजी नेपाल सरकारले संझौतासँगै उपलब्ध गराए पनि यी सबैले संझौता चिस्याउँदै फ्रिजिङको अवस्थामा पुर्याएका छन् । पूर्वपश्चिम लोकमार्गसँगै अप्टिकल फाइर बिछ्याउने र जनताका बीचमा […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Artha Jagat, mainNews, Technology
के सिरियाको लडाइँमा रसायन अस्त्रको प्रयोग भएकै हो ?
काठमाडौ । सिरियाको लडाइँमा सरकारी पक्षले रसायन अस्त्र प्रयोग गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ । तर यो आरोपलाई सिरियाले इन्कार गरेको छ । सिरियाका अनुसार त्यो रसायन अमेरिकाले दिएको र राज्य विरोधीहरुले प्रयोग गरेको बताएको छ । अमेरिकाले भन्ने गरेको १०६ प्रकारका रसायनहरु सिरिया युद्धमा प्रयोग भएको सिरियाले इन्कार गरेको छैन । बरु ती रसायन […]
Posted in: २०७४–चुनाव, International News, Jiwan saili, mainNews, Technology, Tippani Bislesion
‘ट्यारिफ किङ’ भारत अब ‘फाइटर किङ’ बन्दै
काठमाडौं । आउँदो साता रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारतभ्रमणम आउँदै छन् । भारत भ्रमणका क्रममा उनले हतियाार किनबेच सम्बन्धी संझौता पनि गर्ने छन् । यसका लागि भारतले पूरै तयारी गरिसकेको बताइएको छ । जानकारीमा आएअनुसार फाइटर विमानसहित भारतले ५ अर्ब डलर बराबरको हतियार रसियाबाट खरिद गर्ने छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले संसारमा सबैभन्दा […]
Posted in: २०७४–चुनाव, International News, mainNews, Technology
सम्पदा पुनर्निर्माणमा पुरानै मापदण्ड
काठमाडौं । नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट नेपाली सांस्कृतिक सम्पदाहरु ढल्न र चर्कन पुगेपछि तिनको मर्मत तथा सम्भारका लागि नेपालको राष्ट्रिय बजेट पनि छुट्टयाइयो । र, विदेशीहरुले संपदा संरक्षणका नाममा केही मोटो रकम पनि उपलब्ध गराए । तर निर्माण कार्यले भने गति लिएन । लामो समयसम्म विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका […]
Posted in: Artha Jagat, mainNews, Technology, Tourism
बिबाद चर्किनुुपूर्व कार्यकारी ‘स्याक’
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकमा मदन खरेल नियुक्त भएका छन् । यसअघि वायु सेवा निगमको महाप्रवन्धकमा रहेका सुगतरत्न कंसाकार वाइड बडी विमान खरिदको बिबादमा मुछिएको थाह भएपछि उनलाई ‘स्याक’ गरेर पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । अवकाश पाउनु आठ महिना मात्र बाँकी रहँदा नै उनलाई यसरी जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । हाल नियुक्त मदन खरेल नेपाल […]
Posted in: २०७४–चुनाव, mainNews, Technology, Tourism
एप्पलले सार्वजनिक ग¥यो तीनवटा आइफोन, के के छन् त विशेषता ?
काठमाडौं, भदौ २८ । एप्पलले सनफ्रानसिक्कोमा बुधबार राति एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै आफ्नो नयाँ तीनवटा फोन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आइफोन एक्स एस, एक्स एस म्याक्स र एक्स आर । जसमध्ये एक्स एस र एक्स एस म्याक्समा डबल सिमकार्ड सपोर्ट गर्नेछ । तीनवटै फोनमा फेस डिटेक्सनको फिचर भएकाले सुरक्षित मानिएको छ । आइफोन […]
Posted in: mainNews, Technology
नोकिया सेभेन छिट्टै बजार आउँदै, के छ त विशेषता ?
पछिल्लो समयमा एचएमडी ग्लोबलले लगातार मिडरेन्ज तथा बजेट स्मार्टफोनहरु लञ्च गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कम्पनीले नोकिया ६.१ प्लस, नोकिया ६.१, नोकिया ५.१ प्लस, नोकिया ५.१, नोकिया ३.१ र नोकिया २.१ बजारमा ल्याइसकेको छ । अब भने कम्पनीले नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । एचएमडीले नोकिया मोबाइल ताइवानको ट्वीटर ह्याण्डलमा एक नयाँ स्मार्टफोनको लञ्चिङसँग सम्बन्धित […]
एप्पलले सेप्टेम्बर १२ मा तीन नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने
एजेन्सी । अमेरिकी आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले आगामी सेप्टेम्बर १२ मा आफ्नो तीन वटा नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । एप्पलले आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट एक भव्य समारोहको साथ गर्ने र मिडियालाई पनि निम्तो दिन सुरु गरिसकेको छ । सोही निमन्त्रणका आधारमा नयाँ आइफोन सार्वजनिक हुने मितिको खुलासा भएको हो । यद्यपि एप्पलले उक्त समारोहमा […]
रामेछापमा ९ दलको बिरोधसभा सम्पन्न
एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दबाब, अमेरिकी उच्च प्रतिनिधिहरुकाे नेपाल भ्रमण बाक्लियाे
क्रान्तिकारी माओवादीको बुटवल पश्चिमको अभियान टोली अर्घाखाँची प्रबेश
देजमो अध्यक्ष गजुरेल र नेता शर्माले अस्पताल पुगेर बुझे प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता लोहनीको स्वास्थ्य स्थिति
क्रान्तिकारी माओवादीको अभियान टोली निरन्तर रुपले गाउँ गाउँमा कृयाशील